Released Statement of the 2nd meeting of the Permanent Committee of the FPNCC – FPNCC
Posted on March 29, 2018 March 29, 2018 by FPNCC
Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC)
FPNCC ၏ ဒုတိယအကြိမ် အမြဲတမ်းကော်မတီအစည်းအဝေး
ရက်စွဲ – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၈) ရက်
ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (FPNCC) ၏ ဒုတိယအကြိမ် အမြဲတမ်းကော်မတီ အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၆) ရက်မှ (၂၈) ရက်နေ့အထိ ပန်ခမ်းမြို့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသော-
(၁) ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)
(၂) ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ULA)
(၃) ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF)
(၄) မြန်မာနိုင်ငံအမှန်တရားနှင့် တရားမျှတသောအမျိုးသားပါတီ (MNTJP)
(၅) ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP)
(၆) ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စည်းလုံးရေးကော်မတီ (PSC)
(၇) “ဝ” ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP) တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း (၂၇) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ကာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤအစည်းအဝေးမှ အောက်ပါအချက်များအား ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်။
၁။ အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ မျက်မှောက်ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်မှု အလားအလာအပေါ် ဆွေးနွေးသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အပြုသဘောဆောင်သော ပါဝင်မှုသည် ပိုမိုအရေးပါလာပြီး ကင်းကွာ၍မရနိုင်ပါဟု ထင်မြင်ယူဆကြပါသည်။
၂။ အစည်းအဝေးတွင် (၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအပေါ် မည်သို့သဘောထားရှိသည်ကို သေချာဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီး FPNCC အနေဖြင့် အစိုးရ၏ တရားဝင်ဖိတ်ကြားလွှာကို လက်ခံရရှိပါက FPNCC အဖွဲ့ဝင်အားလုံး စုံစုံညီညီတက်ရောက်သွားမည်။ ထို့အတူ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်အခါ လုံခြုံရေးအာမခံချက်ရှိရန်အတွက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအနေဖြင့် ခရီးစဉ်အတွက် ဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၃။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဤတစ်ကြိမ်အမြဲတမ်းကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှ ယခုထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အဓိကလုပ်ငန်းများကို အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
၄။ ကချင်၊ တအန်း၊ ကိုးကန့် နှင့် ရခိုင်ဒေသများတွင် ထိုးစစ်နှင့် စစ်ဆင်ရေးများကို ပြုလုပ်နေသော မြန်မာစစ်တပ်၏ လုပ်ရပ်များကို ကန့်ကွက်ရှုံ့ချလိုက်ပြီး တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်နည်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းရန်တောင်းဆိုပါသည်။
၅။ မတ်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် သမ္မတသစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသော ဦးဝင်းမြင့်အား FPNCC မှ ကြိုဆိုလိုက်ပြီး သမ္မတသစ်၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆောလျင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။
Proclamations Made at the 2nd Meeting Held by the Permanent Committee
Federal Political Negotiation and Consultative Committee’s (FPNCC) second annual meeting of the permanent committee was held successfully at the headquarter of the “Wa” state government in the special region (2) in Pangkham, Myanmar from 26 March 2018 to 28 March 2018. The FPNCC members in attendance were as follows:
2. United League of Arakan (ULA)
3. Palaung State Liberation Front (PSLF)
4. Myanmar National Truth and Justice Party (MNTJP)
6. Peace and Solidarity Committee (PSC)
7. United Wa State Party (UWSP)
Altogether, 27 delegates from the above organisations participated in the meeting. Overall, the meeting wasasuccess. Stemming from discussions at this productive meeting, that the following declarations be publicised:
1. That the organisations unanimously discussed Myanmar’s internal political situation and the route to establishing peace in Myanmar. They highlighted that the active involvement of the People’s Republic of China’s leadership in Myanmar’s peace negotiations to be crucial.
2. That should the government of Myanmar legitimately invite the FPNCC members to the third meeting of the 21st Century Panglong Conference, FPNCC shall attend suchaconference. FPNCC also requests that security and travel plans for the members attending that conference be arranged by the People’s Republic of China.
3. The delegates from each of the FPNCC member organisations presented their annual reports on their activities and achievements.
4. That the FPNCC condemns the Myanmar military’s current ongoing war against Kachin, Ta Ang, Kokang and Rakhine states. The committee expressly urges the Myanmar government to resolve Indigenous issues through political negotiations.
5. The FPNCC cordially congratulates Honourable U Win Myint upon his new appointment as the President of Myanmar on 28 March 2018. The committee envisages that he brings peace to all of Myanmar at the earliest possible time.
Posted in StatementsTagged FPNCC's Statement